विश्वको कुनै पनि शक्तिले प्रचण्डलाई कारबाही गर्न सक्दैन : दिपेन्द कँडेल - Himali Patrika
विश्वको कुनै पनि शक्तिले प्रचण्डलाई कारबाही गर्न सक्दैन : दिपेन्द कँडेल
हिमाली पत्रिका १४ मङ्सिर २०७७, 8:30 am
हेग भनेको एउटा सहरको नाम हो । जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालत छ । पछिल्लो केही समययता नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लैजाने भन्ने विषयमा चर्चा भइरहेको छ ।
पहिलो कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने हेगमा कुनै पनि व्यक्तिले मुद्दा लड्न पाइदैन । कुनै पनि एउटा देशले अर्को देशको विरुद्ध मुद्दा लड्ने हो । मतलब नेपालले भारतको विरुद्धमा वा भारतले नेपालको विरुद्ध । कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको विरुद्ध मुद्दा लड्ने ठाउँ होइन, हेग । तसर्थ,
सर्वप्रथमत : हेगमा नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लैजाने कुरा वाइयात हो ।
म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, प्रचण्ड भन्ने व्यक्तिको नामको पक्षमा म छैन, तर म शान्तिप्रक्रियाको पक्षमा छु । जुन शान्तिप्रक्रियाका जिउँदो हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्ड हुन् । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डको नेतृत्वदायी भूमिका नभएको भए जनयुद्धकालमा १८ हजार मात्रै होइन, १८ लाख जनता मर्थे यो देशमा । त्यसैले गिरिजाबाबुको लिडरसिप र प्रचण्डको नेतृत्वदायी भूमिकालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ ।
मुल कुरा भनेको प्रचण्डलाई हेगमा लैजान्छु भनेर नेपालकै नेताहरुले उचालिरहेका छन् । प्रचण्डजी अमेरिका जाने भन्ने कुरा कसलाई थाहा थियो ? एउटा चिठी बनाउन ५ दिन लाग्छ, प्रचण्डजी जानेवित्तिकै लेटर हालेर पक्राउ गर्न एक महिना लागछ ? आखिर त्यतिबेला यो लेटर लेख्न लगाउने को हो ?